YAANYO FOORNADA: SIFOOYINKA BEERAHA IYO DABEECADAHA KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Sida loo koro yaanyo "Pertsevidny", gaar ahaan beerto iyo daryeelidda warshad
Tamaandho - mid ka mid ah dalagyada beerta ugu caansan. Waxaa laga heli karaa beerta oo dhan. Inta lagu jiro jiritaanka khudraddan, noocyo farabadan ayaa la soo saaray oo leh sifooyin kala duwan waxayna ku haboon yihiin xaalado kala duwan.
Tamaandho "Bariis": sharaxaad iyo noocyo
Yaanyo "Bariis" daaweynayaa buundooyinkan kuwaas oo sharraxaya sababaha ururrada leh khudaarta kale. Kala duwanaanta noocaan ah ayaa dhab ahaantii la mid ah basbaas. Dhirta dhererka dhererkeedu wuxuu gaaraa 15 cm, waxay yihiin kuwo aad u culus, waxay ku shaqeeyaan wax aan ka koobnayn abuurka. Joogitaanka jidhka waa miisaan, dhadhanka waa macaan.
Noocani noocan oo kale ah ayaa iska leh noocyo dabacsan, noocyo dhexdhexaad ah. Burush kasta, celcelis ahaan 7-8 miro ayaa la sameeyey, miisaanka mid kastoo kala duwan wuxuu u dhexeeyaa 50 illaa 80 g Yaanyo Pertomid waa uu hooseeyaa ama wuxuu gaari karaa 1.5m dherer ahaan, iyo dhalidii mitir laba jibbaaran waa qiyaastii 9 kg.
Ma taqaanaa? Maqnaanshaha ereyga "basbaas" - yaanyada 115 maalmood.
Kalluumaysatadu ma daalaan tijaabinta yaanyada, si joogto ah u keena noocyo cusub iyo isbeddelka kuwa hadda jira. Iyada oo ku xiran kala duwan, yaanyada "Pertsevidny" waxay yeelan kartaa midab kala duwan oo midho ah, midabkoodu wuxuu noqon karaa casaan, oranji ama jaalle.
Xaaladahee ayuu yaanyo u baahan yahay koritaan guul leh?
Wixii "Pertsevidnogo" yaanyo ku habboon carrada non-acidic, sariiraha, halkaas oo hore waxaa jiray ash ama compost la qaaday. Haddii aysan jirin meel ka mid ah goobtaada, ka dibna ciidda waxay u baahan doontaa in lagu daro dheeraad ah.
Waa muhiim! Marka beeritaanka yaanyo, iska ilaali meelo baradho loo isticmaalo si ay u koraan.
Sida loo abuuro yaanyo bambas ah
Yaanyo "Pertsevidny", sida noocyo kala duwan, ayaa marka hore la koray geedo oo kaliya kadibna lagu beeray dhul furan.
Diyaarinta ciidda iyo abuurka loogu talagalay geedo
Tan iyo tamaandhada ka mid ah noocyada hybrid, miraha aad leedahay si aad u soo iibsato gaar ah dukaanka.
Tani waxay leedahay faa'iidooyinkeeda: abuurka la iibsaday uma baahna in la sii diyaargaroobo, waxay horeba u leeyihiin biqilka wanaagsan.
Sida ciidda, ka dibna ugu wanaagsan natiijada waa suurad wacan si loo diyaariyo ciidda nafaqo leh. Si aad tan u sameyso waxaad u baahan doontaa (ku saleysan hal baaldi oo ah ciidda beerta):
1 baaldi of humus decomposed;
1 l bangiga balka yar ee sawir leh;
Ciid 0.5 litir ah;
1 tbsp. l double double superfosphate granular granite;
3 tbsp. l ash alwaax.
Sida loo abuuro abuurka yaanyo
Ka hor intaadan beerin "yamaar", waa lagama maarmaan in la hubiyo in xaaladaha heerkulka saxda ah lagu arkay qolka. For yaanyo waa +25 digrii. Seeds lagu beeray qoto dheer oo aan ka badnayn hal mitir.
Goorta iyo sida loo soo qaato yaanyo
Picks weelal gaar ah ayaa lagu sameeyaa muuqaalka labada caleemood. Kala bedelka Tamaandhiga "Pertsevidnogo" ee dhul furan waxaa la soo saaraa inta lagu jiro May. Si kor loogu qaado hal mitir oo laba jibbaaran waa in la beeraa aan ka badnayn afar geedo.
Sida loo helo goosashada qani ku ah tamaandhada, gaar ahaan daryeel
Tamaandhiga "Pertsevidny" ma aha warshad ugu dhirta, beeritaanka iyo daryeellidda warshadan iyada oo hoos imanaysa awoodda beerta heer kasta. Si aad u soo qaadatid soo-saarka ugu sarreeya, waa in aad raacdaa sahlan, laakin waqti isku mid ah talooyin muhiim ah. Daaweynta yaanyada waxaa lagu yareynayaa waraabinta saxda ah iyo pasynkovanyu.
Tamaandho "Pertsevidny": sida loo biyo iyo bacrimiyo warshad
Soosaarka yaanyo wuxuu si toos ah ugu tiirsan yahay tayada waraabinta. Tamaandhiga "Pertsevidny" waxay u baahan tahay waraabin isku mid ah, iyada oo aan loo eegin haddii aad koraan nooc jaale ama casaan. Noocyo hooseeya oo sii kordhaya waxay u baahan yihiin waraabinta afar jeer xilli:
Isla markiiba kaddib marka la furo;
20 cisho kadib marka la furo;
Dhamaadka dhammaadka Juun.
Noocyada Tallaalka ah ee yaanyada waa in yar la waraabiyaa, oo haddii cimiladu aad u qalalan tahay, ka dibna waraabinta waxaa loo baahan yahay saddexdii maalmoodba mar. Wixii dheefshiidka ugu wanaagsan ee yaanyada yaanyada, waxaad u baahan tahay inaad qodo godad yar oo ku yaal sariirta beerta leh dhirta iyo ku shub biyo halkaas.
Waa muhiim! Ha isticmaalin biyo qabow! Biyaha infakshanku waa ku habboon yihiin, adigoo isticmaalaya biyaha tuubada ama laga soo wacayo ceelka laguma talinayo.
Ka dib markii tamaandhada "Pertsevidny" ha hoos marin xididada lateral (aan ka horeyn bil ka dib marka la furo), waxaa lagu beeray karaa digada ama digada digaagga. Inta lagu jiro inta yaanyada ubax waa in lagu bacrimiyo dambas.
Haddii dhirtaadu aad u qallalan tahay, ka dibna Bacriminta nitrogen ayaa ku caawin doona. Haddii, on lid ku ah, waxay u helaan tiro tiro badan oo degdeg ah, ka dibna waxay u baahan yihiin Bacriminta fosfat.
Maaskarada "Yari" oo yaanyo ah, oo sida loo qaabeeyo baadiyaha
Tamaandhiga "Pertsevidny" ee bannaanka u furan waxay u baahan tahay dayactir taxaddar leh iyo manipulations gaar ah, nooca noocyada kale ee badankood. Wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah tan Ka qaadista waqtiyada ku habboon ee tallaabooyinka.
Ma taqaanaa? Laamaha la yiraahdo pasynkas, oo ka qaada nafaqooyinka iyo biyaha yaanyada.
Ka saar qaangooyinku waa inay noqdaan wakhtigooda, ilaa ay ka badnaayeen 5 cm. Haddii aad tan dambe sameyso, warshadu waxay heli doontaa dareen badan, ka dib marka boogta ay sameysmi karto oo yaanyo aad u engegi doonto.
Cimilada qorraxda ayaa ugu fiican inay ka saarto tallaabooyinka, nabarrada waqtigaan ayaa si dhakhso ah u bogsanaya.
Waa muhiim! Haddii talaabooyinka aan la saarin oo ay sii koraan, ka dibna tamaandhadu midho ma dhali doono.
Waxa kale oo loo baahan yahay in la jaro caleemo cusub oo soo muuqda midabka hore. Waxay kaloo qaataan biyaha iyo nafaqooyinka, taas oo si xun u saameeysa dhalidda.
Tamaandho Faleed: Faa'idada iyo Ciladaha noocyada kala duwan
Kala duwan walba waxay leedahay faa'iido iyo faa'iido gaar ah. Noocyada Hybrid waxay leeyihiin faa'iidooyin dhawr ah oo ka dhigaya iyaga inay doorbidaan noocyo dhaqameed.
Ma taqaanaa? Tamaandho "Pertsevidny" Orange waxaa lagu qiimeeyaa beeraley ma aha oo kaliya sababtoo ah dhadhanka midhaha, laakiin sidoo kale sababtoo ah midabka dhalaalaya, taas oo loo arkaa mid aad u yar oo ka mid ah yaanyada.
Waxay leeyihiin wax-soo-saarka wanaagsan, miraha si siman u bislaadaan, dhammaantood waa isku mid.
Intaa waxaa dheer, noocyo kuwaas, oo ay ku jiraan yaanyo "Pertsevidny", aad u adkaysi u cudurada iyo cayayaanka, taas oo si fudud u fududeynaya daryeelka iyaga.
Faa'idada dhaqanka waa qiimaha miraha, taas oo ah amar aad u weyn oo ka badan noocyada caadiga ah. Intaa waxaa dheer, miraha kuwan aan la heli karin mustaqbalka, waa inaad sannad kasta soo iibsato.
Tamaandhiga "Pertsevidny" ayaa hoos u dhigay noocyo, iyo dhererka ugu sareeya wuxuu gaari karaa 1.5 mitir.
Goynta "Beerleeyda" Tamaandhada
Tamaandhada cawsku wuxuu ku jiraa 110-115 maalmood kaddib marka la beerto. Midhaha ugu horreysa waxay horey u muuqdaan horaantii Luulyo, waxayna ku dhamaanaysaa miro khudradeed bartamihii Sebtembar. Goynta by habka waa wax ka duwan goosashada noocyo kale.
Midhaha la uruuriyay ayaa la isticmaali karaa cusub, laakiin sidoo kale waxay ku fiican yihiin ilaalinta aruurinta.
Tomato "Pertsevidny" waa wakiil aad u fiican ee khudaarta beerta, dabeecadihiisa iyo sharraxaad sannad kasta ku dhiirigaliso inuu bannaanka u tijaabiyo inuu tijaabiyo adigoo iibsanaya noocyadaas goobtooda.